Muuqaalka isbadalka naxdinta leh uu ku yimid ee Madaxweyne Cali Abdalla Saalax(DAAWO) – SBC
Muuqaalka isbadalka naxdinta leh uu ku yimid ee Madaxweyne Cali Abdalla Saalax(DAAWO)
Madaxweynaha wadanka Yemen Cali Cadalla Saalax ayaa markii ugu horeysay waxaa la soo bandhigay muuqaalkiisa, iyadoo dhaawac xumi uu ka muuqdo isla markaana gacmihiisa aan qaadin karin, gacanta midig ayaa aad uga muuqdaa dhaawac xun.
Cali C/lla Saalax ayaa ka hormuuqday Taleefishinka isagoona aan wax dhaqdhaqaaqa ah aysan samaynayn gacmihiisa,waxaana uu ahaa mid ku dhaganaa kusriga uu fadhiyay.
Filimka muuqaalka ah ee laga qaaday Madaxweyne Saalax ayaa qofkii horey u yaqiin wajigiisa uu aad uga naxayaa sida dhaawaca ka soo gaarey weerarkii lala beegsadey masjid ku yaal xarinta madaxtooyada uu badaley wajigiisa & muuqaalkiisa.
Cali Cabdalla Saalax oo cimaamad wata isla markaana qamiis wata garka oo cireystayna uu ku baxay ayaa ku daawan kartaa filimkan.Link-ga Video-ga hoose ka daawo muuqaalkan naxdinta leh ee madaxweyne Saalax.
Waa Wax laganaxo is badalka deg degaa oo kiyimid Saalax Alle ha uyasiro.
ilaahay xanuunka haka qaado ninkaas
xukun jaceylku mawanaagsana
cajiib ninkan sidaan muu noqdey, waa yaab, sbc waxaan ku jeclahay wararkan camal, aad ayaan idiin salaamaa bahda sbc oo ugu horeeyo injineer mowliid, sidan ayaan ku xiiseynaa wararkiina oo ah kuwa run ah oo la yaab leh
AAD AYAAN UGA XUMAHAY ARINTA KU TIMI MASDAXWEENAHA WADANKA YAMAN WAAN KA TACSIYEENAYNAA
waan kaxumahay waayo waxuu ahaa nin jacel umadasoomaalia